မော်လဒိုက်ကျွန်းနိုင်ငံသည် ဘီစီအီး လေးရာစုကတည်းကပင် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်နှင့် သမိုင်းကြောင်းအရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ ကူးလူးဆက်ဆံမှု ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ မော်လဒိုက်ကျွန်းဆွယ်သည် ၁၂ ရာစုတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာ သွတ်သွင်းခြင်း ခံရပြီး ဆူလတန်များ အုပ်ချုပ်သည်။ အာရှနှင့် အာဖရိကတို့နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းတို့၌ ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ ၁၆ ရာစုအလယ်ပိုင်းမှ စ၍၊ ဥရောပ ကိုလိုနီပြု နိုင်ငံများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရပြီး၊ ၁၈၈၇ တွင် ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ လက်အောက်ခံ နိုင်ငံ ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၆၅ တွင် ဗြိတိန်က လွတ်လပ်ရေး ပေးပြီး သမ္မတ ရွေးကောက်ကာ သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်သည်။ နောင်ဆယ်စုနှစ်များစွာတွင် နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရန် ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်းတို့ကြောင့် လူသိများလာသည်။
Henley၊ Jon။ "The last days of paradise"၊ The Guardian၊ 11 November 2008။ 12 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "[The Maldives] holds the record for the country with the lowest high point on earth: nowhere on the Maldives does the natural ground level exceed 2.3m. Most of [the Maldives'] land mass, which totals roughly one-fifth of Greater London, isagreat deal lower [...], averaging around 1.5m."
"Copenhagen Accord"၊ New York Times၊ 18 December 2009။2July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။